Otu esi etinye Spotify na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
November 12, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 3 - Wụnye Spotify na Snap
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ngwa Spotify na desktọpụ Debian 11 Bullseye gị site na iji ụzọ atọ dị iche iche.
Iwu a dị n'elu ga-agbakwunye ebe nchekwa Spotify na-akpaghị aka na ndekọ Debian APT yana ndepụta ya pụrụ iche.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Awụnyeghị Flatpak na Debian 11 Bullseye na ndabara, mana ọ dị na ebe nchekwa ya.
Na-esote, ịkwesịrị ịme ka Flatpack maka Debian 11 iji iwu na-esonụ na njedebe gị:
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Debian nwere ike mara Snap ka ọ na-emepụta ma na-echekwa ya site na Ubuntu; Agbanyeghị, etinyeghị ya na sistemụ gị. Agbanyeghị, enwere ike itinye nke a ngwa ngwa.
Dị ka n'elu, nke a na-agwa gị Spotify e ọma arụnyere na version nọmba.
Mara, ọ bụrụ na akara ngosi gị adịghị efu, wee leghara iwu a dị n'elu anya.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye Spotify na desktọpụ Debian 11 Bullseye gị site na iji ụzọ atọ dị iche iche, nke ị nwere ike ịgbanwe n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu njikwa ngwugwu karịa nke ọzọ. Ụzọ kachasị atụ aro bụ ịwụnye ebe nchekwa Spotify na APT, mana nhọrọ abụọ siri ike.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Spotify Mail igodo
Otu esi etinye Atom Text Editor na Fedora 35